Mashandisiro emitsva mhedzisiro yemifananidzo muMessage | IPhone nhau
Mashandisiro ekushandisa mitsva maphoto mhedzisiro muMameseji
IOS 12 Messages application yasvika padanho ratisingatombo fungidzira tichifunga nhanho dzakangwara idzo dzakatorwa nekambani yeCupertino nechikumbiro ichi, sevhisi yekutumira mameseji iyo yagara ichizivikanwa nekureruka kwayo uye kugadzikana. Nekudaro, izvozvi rave rinoshanda rakazara rekutumira mameseji neakawanda kana akawanda kugona semakwikwi, nguva dzose mukati memiganhu iyo Apple inowanzo gadzirira zvigadzirwa zve software zvaro. Tiri kuzokudzidzisa maitiro ekutumira akanakisa mifananidzo kuburikidza neMessage application yekutenda kune ayo ese matsva mhedzisiro. Gara nesu uye ushandise zvakanakisa maficha matsva ekushandisa.
1 Ndezvipi zvitsva kamera maficha muMessage?
2 Maitiro ekuwedzera aya mhedzisiro kumifananidzo yedu mumamessage
3 Maitiro ekugadzira yako yega Memoji kana ikasaratidzika kwauri
4 Maitiro ekudhawunirodha zvitambi kuti uite zvemifananidzo
Ndezvipi zvitsva kamera maficha muMessage?
Iyo kamera mukati meMessage application yawana akawanda maitiro ekugadzirisa nekuda kwesimba rakajeka remapurosesa ayo aanokwira Apple nguva pfupi yadarika pafoni yavo. Ndokusaka isu tichizokwanisa kushandisa yeAugmented Reality pamwe nezvazvino zvitambi, kusarudza kuti tinovasanganisa riini uye sei. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti zvinonyadzisa chaizvo kuti Apple haina kufunga nezvekusanganisira iyo yekugadzirisa foto sisitimu ine kugona uku pasina kupinda kweMessage application, ndiyo nzira yekutikwezva kune yayo mameseji application?
Animoji: Animoji yakasvika nguva refu yapfuura, ichitibvumidza kuisa masiki anoita kuti "zviso" zvedu zvinakidze, sezvo zvichatsiviwa neizvo zvakaverengerwa neApple uye zvichadzokorora kuita kwedu pamwe nezvatiri, kubva kuT-Rex kusvika dehenya.
MeMoji: Iyi vhezheni nyowani yeAnimoji inotipa mukana wekuti iwe ushandise aya masiki, uchivapa mumwe mufananidzo wevanhu asi panguva imwecheteyo katuni. Nekudaro, izvo zvekutarisa kumeso kugona zvakangofanana neizvo zviripo muAnimoji.
Mafirita: Kugona uku, kwatovepo mukushandisa senge maVideo mune dzakapfuura shanduro dzeIOS, zvinotibvumidza kuti tiwedzere mafirita emarudzi ese kumifananidzo yedu, kubva pakukwevera izvo zvinomirirwa nekamera mune comic, kuenda kumberi kune dema uye chena.
Zvinyorwa: Izvo zvichatibvumidza isu kuti tiwedzere chinyorwa chinoteera pamufananidzo, tinogona kuchigadzirisa nekunyora mazwi akareruka ezvedu zvatinoda kuratidza, kana kuvapa kufunga kwakanyanya nemabhuru ekutaura uye kudeedzera.
Mifananidzo: Miseve, zviratidzo uye kunyangwe zvikwikwidzi, aya ndiwo maitiro atichakwanisa kutarisisa kutarisisa kwemutambi wemufananidzo pane iyo chaiyo poindi yatinoda.
Chiitiko: Hutano hwekuteedzera uye kuruma kune hutano zvakare kune nzvimbo muMessage application natively nemifananidzo yayo mitsva.
Stickers: Stickers anga aripo kwenguva yakareba. Tinovonga kwavari isu tichakwanisa kugadzira iwo mapikicha chero bedzi isu takambo dhawunirodha.
Maitiro ekuwedzera aya mhedzisiro kumifananidzo yedu mumamessage
Kune vamwe vashandisi vasina kujairika nehurongwa zvinogona kunetesa, uye sezvatataura, zvinoshamisa kuti nzira chete yekuenderera neshanduro iyi munguva chaiyo iri kuburikidza neMeseji. Kuti tiite izvi isu tinofanirwa kuisa yemuno mameseji kunyorera yeiyo iOS system uye tinya pazasi kuruboshwe -notevera kubhokisi remavara- pane ikamera icon, ipapo kuongorora kwemufananidzo watiri kuda kutora kuchavhura.
Tichingori mukati ingangove kamera system, isu tinowana muzasi kurudyi icon yemifananidzo muIOS. Kana tikadzvanya pairi, menyu yakajeka ichavhura kumusoro, zvakanyatsonaka, izvo zvinosanganisira icon yeimwe yeanoshanda ayo atinogona kushandisa kugadzirisa mapikicha edu kusvika pakakwirira, ikozvino isu tinongofanirwa kuyedza imwe neumwe ku tsvaga iyo yatinonyanya kuifarira uye nokudaro tibudirire pazviri.
Maitiro ekugadzira yako yega Memoji kana ikasaratidzika kwauri
Zvinogoneka kuti hauzoone chero basa rekuwedzera Memoji kuchinyorwa chemifananidzo yako, mhinduro kudambudziko iri yakapusa, izvi imhaka yekuti hausati wasika chero Memoji. Kune izvi isu tinofanirwa kungodzokera ku Messages application, ipapo kamwe mukati, pazasi chete pebhokisi remavara isu tinowana iyo icon yemonkey ine muromo wakashama. Kana isu tikabaya pane ino icon isu tinopinda Animoji yekugadzira menyu.
Kana isu tiri mukati meiyo Animoji menyu yekugadzira uye isu tinotsvedza kuruboshwe tinowana icon «+» ine zvinyorwa Nyowani Memoji. Ipapo isu tinokwanisa kugadzira yedu yega Memoji uye nekudaro gare gare tichaiwana kuti ioneke mukati meiyo chaiyo-nguva yekugadzirisa marongero emifananidzo kuburikidza nemasefa uye zvimiti zveMessage application. Ndokunge, iwe haugone kugadzira Memoji kubva kune yekugadzirisa kana Yakawedzera Reality chikamu chekhamera.
Maitiro ekudhawunirodha zvitambi kuti uite zvemifananidzo
Iwo matikita anofanirwa kutorwa pasi pachine nguva kuburikidza neApp Store inowanika mukati meMessage application kana tichida kuzokwanisa kuishandisa mukugadzirisa mifananidzo kuwedzera kune iyo system yekutumira zvitambi kuburikidza nemeseji sezvanga zvichingoitika kusvika zvino. Kuti tiite izvi tinofanirwa kubaya paApp Store icon inowanikwa pamusoro pebhokisi remavara eMessage application uye ichatitungamira kuchikamu uko kunonamira zvese izvi. Taura kuti nepo vamwe vari vemahara zvachose, vamwe vanobhadharwa kana kuverengerwa mumaapplication atakatenga kare - isu hatifanirwe kuvabhadhara-.
Sezvo neMemoji, izvi zvinonamira zvichaonekwa muchikamu chekudhirowa chemifananidzo mukati meMessage chete kana isu tambozvirodha pasi., zvikasadaro hatizokwanisi kuzvishandisa. Parizvino, rondedzero ine iOS natively inowanikwa ishoma, izvo zvinoita kuti mashandiro aya awedzere kukwezva kana tikadhinda izvo zvimiti izvo zvatinoona zvinonakidza mukati meApp Store. Ikozvino hongu, iyo iOS Meseji kunyorera kuri kunakidza kugovana zuva nezuva zuva sevamwe vese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Mashandisiro ekushandisa mitsva maphoto mhedzisiro muMameseji
Nhungamiro yekushandisa iyo "Usakanganise" maitiro eIOS 12
Mamwe maApple Watch Series 4 akatanga nyaya